Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata mmiri mmiri nke China - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Isi ịsa ahụ
Isi ịsa ahụ Ndị nrụpụta
Isi ngwaahịa anyị bụ isi ịsa ahụ, bụ nke a na-ekewa n'ime isi ịsa ahụ na aka na isi mmiri ịsa ahụ. Anyị nwere ọtụtụ narị ngwaahịa maka ịhọrọ. Ihe ndị bụ isi bụ plastik ABS dị elu, nguzogide okpomọkụ dị elu, interface zuru ụwa ọnụ, dabara maka ọtụtụ ezinụlọ, akwụkwọ ikike afọ abụọ. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla a chọrọ, dị ka nlekọta ahụike, nrụgide, ịzọpụta mmiri, nzacha, wdg, nabata ịkpọtụrụ, na anyị dị njikere ịnye gị ndụmọdụ ọkachamara.
Anyị nwere ike ike ịzụlite a dịgasị iche iche nke ọhụrụ ngwaahịa dị iche iche nha na nkọwa na okenye ahịa anyị nhọrọ dị iche iche na dị iche iche chọrọ. A na-ekwe nkwa ịdị elu nke isi ịsa ahụ site na teknụzụ dị elu, akụrụngwa ọgbara ọhụrụ, na njikwa mma na ọkwa mmepụta ọ bụla. Site n'ọhụụ njikwa anyị na ọganihu na-aga n'ihu, ngwaahịa ndị ahụ na-ere nke ọma n'ahịa ụwa, nke nwetara aha ọma. Azụmahịa anyị pụrụ iche na R&D, OEM, ODM.
Zụrụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ anyị a na-akpọ Huanyu Sanitary Ware bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebuga Isi ịsa ahụ na china. Ogo anyị dị elu Isi ịsa ahụ na-ewu ewu na ndị chọrọ inweta ngwa ahịa dị ọnụ ala. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa iji nye ọrụ n'ogbe. Ị nwere ike ijide n'aka ịzụta ọnụ ala dị ala site na ụlọ ọrụ anyị.